Igumbi le-Anemone - I-Airbnb
Ikamelo e-ifulethi ibungazwe ngu-Lorenzo
Igumbi elilodwa elisesifundeni saseSanta Croce, enkabeni yomlando yedolobha laseFlorence, efulethini elilungiswe ngokuphelele le-condominium esitezi sesibili, elinamanye amakamelo okulala amabili, okuzohlanganyela kuwo izindawo ezivamile, njengekhishi nendlu yokugezela. Ibheke igceke langaphakathi elithule kakhulu elingenaso isiminyaminya, linengadi encane enezihlahla. Isikhala, esifakwe kahle, sithokozela ukukhanya kwelanga okwanele usuku lonke, sibheke uhlaza.
Indawo yokudlela, nazo zonke izesekeli ezidingekayo ekuphekeni nasekudleni; Kukhona nezinto zikagesi ezifana nohhavini, umshini wokuwasha, i-microwave, i-toaster negedlela likagesi. Igumbi lokugezela elineshawa kanye nesitimela sethawula elishisayo. Isivakashi sizokwazi ukufinyelela kuvulandi abangu-2, elilodwa lawo eliyimfihlo, phambi kwegumbi futhi elilodwa elabelwe, elifinyeleleka ekhishini. Kufakwe ekamelweni khona-ke amasethi amabili welineni lokulala, ukubhekana nanoma yisiphi isizini, amathawula okugeza kanye nabalandeli be-ceiling elawulwa kude. Ukusetshenziswa mahhala kwe-wi-fi efulethini. Kungenzeka ukusebenzisa indawo ye-balcony yangaphandle ukuze udle ukudla kwasekuseni ngezikhathi ezifudumele, ukubhema noma ukulenga ilondolo.
Indawo ephilayo enemakethe yendawo nezakudala, izindawo zokudlela, amasinema, ithiyetha, umtapo wolwazi we-Oblate omuhle, nomtapo wezincwadi wamaphephandaba kanye nendawo yokudlela. Kunesitolo esikhulu (Conad) esiqhele ngamamitha angama-50 ukusuka efulethini. Ukupaka kumahhala emigwaqweni eseduze ne-condominium, engafinyelelwa kuphela uma isango lokungena endaweni ye-ZTL lingasebenzi, kuyilapho ngenkokhelo eduze nemakethe yase-Sant'Ambrogio, e-Piazza Beccaria noma egaraji eligadiwe e-Via dell. . 'Oriuolo.
Izivakashi zizobe zizimele ngokuphelele efulethini, umnikazi wendawo uhlala etholakala ukuze acele ulwazi, izincazelo zezobuchwepheshe kanye nemininingwane eyengeziwe ukuze kube lula ukuhlala.